IVerbiage esetshenziswa abantu embonini ingadideka. Uma ukhuluma ngokumaka ngokubhuloga, mhlawumbe usho amagama akhethiwe abalulekile ku-athikili tag futhi kwenze kube lula ukufuna nokuthola. Ukuphathwa komaka ubuchwepheshe obuhluke ngokuphelele nesisombululo. Ngokubona kwami, ngicabanga ukuthi ibizwa ngokungeyikho… kepha sekuyigama elivamile kuyo yonke imboni ngakho-ke sizochaza!
Ukumaka isayithi lingeza amanye amathegi weskripthi ekhanda, emzimbeni, noma kunyaweni yesayithi. Uma usebenzisa amapulatifomu ama-analytics amaningi, izinsizakalo zokuhlola, ukulandela ngomkhondo ukuguqulwa, noma ezinye izinhlelo zokuqukethwe ezinamandla noma eziqondisiwe, cishe ngaso sonke isikhathi kudinga ukuthi ufake imibhalo kuzifanekiso eziyinhloko zohlelo lwakho lokuphathwa kokuqukethwe. Izinhlelo zokuphathwa komaka (TMS) zikunikeza iskripthi esisodwa ongasifaka kuthempulethi yakho bese ukwazi ukuphatha bonke abanye ngeplatifomu yomuntu wesithathu. Uhlelo lokuphathwa kwamathegi likuvumela ukuthi wakhe iziqukathi lapho ungahlela ngokukhalipha amathegi ofisa ukuwaphatha.
Amasistimu wokuphatha amathegi anikwe amandla kuwo wonke amanethiwekhi wokulethwa kokuqukethwe okushesha ngendlela emangalisayo. Ngokwenza isicelo esisodwa kwinkonzo yabo bese ulayisha ngemuva imibhalo ngaphakathi kwesiza sakho, unganciphisa izikhathi zokulayisha futhi uqede amathuba okuthi isiza sakho sizomisa uma insiza ingasebenzi ezansi nomfula. Lokhu kuzokhuphula amazinga womabili wokuguqulwa futhi kusize nokwenza kahle injini yakho yokusesha.
Nasi ukubuka konke okuhle kwe-infographic yezinzuzo eziphezulu eziyi-10 zokuphathwa kwamathegi kubathengisi bedijithali abavela UNabler.